प्रभु बैंकको सेयर कारोबार आजबाट खुल्यो, एक कित्ताको ३३६ रुपैयाँ ! - Arthatantra.com
काठमाण्डौं । १० महिना पछि प्रभु बैंकको नेप्सेमा सेयर कारोबार खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोबार रोकेर प्रभुको मात्र खोल्न अनुमति दिएपछि नेप्सेले प्रभुको मात्र सेयर कारोबार खुलाएको हो ।
प्रभु बैंकको ग्राण्ड बैंकसँग मर्जमा जानु अघि कायम रहेको सेयरको मात्र आजदेखि नेप्सेमा कारोबार फुकुवा भएको हो । प्रभु बैंकले जारी गरेको २० प्रतिशत हकप्रद समायोजन पश्चात बैंकको प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ३६३ रुपैयाँ तोकिएको नेप्सेले जनाएको छ । बैंकको मर्जरमा जानुअघि नेप्सेमा प्रतिकित्ता ४१५ रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको थियो ।
प्रभु बैंकले केही समय अघि साविकको चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेकोमा गत बिहीबार उक्त सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सुचिकृत भैसकेको छ ।
१७ असोज २०७३, १२।००
if i want purchase this bank ‘share,how do i will purchase?
Sir ma halsalai share sambandha ma interest rakhna lageko ho dherai jankari xaina mero chapako bisaya k ho vane share ko types haru Madge ipo , FPO , right share, haruma kun khale share santa sadharan ko lagi ramro ra sajha hunxa bujhnai sahayog garidinu hola
Varni ho tara kata bata ho
सेयर किनिहाल्नुहोस्, २५ प्रतिशत हकप्रद भर्ने अवसर छुट्ला ! काठमाण्डौं । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले कात्तिक २६ गतेबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको […]